Ahoana ny fanovana ny loko volo amin'ny sary amin'ny alàlan'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fanovana ny loko volo amin'ny sary amin'ny alàlan'ny Photoshop
Ny famolavolana sary dia sehatry ny fahalalana amin'izao fotoana izao. Izany dia noho ny antony lehibe indrindra amin'ny fipoahana izay novolavolain'ny teknolojia amin'ny maro amin'ireo lahasa izay azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fitaovana na solosaina marani-tsaina.
Manomboka amin'ity fotoana ity, asa mahazo hevitra vaovao raha ny momba ny fampiharana azy, dia miteraka safidy tsy manam-petra ho an'ireo olona tia solosaina sy ireo asa rehetra izay manarona bebe kokoa ity fitaovana ity amin'ny fandehan'ny andro.
Androany, ny famolavolana sary dia iray amin'ireo faritra fampiharana tsara indrindra manerana an'izao tontolo izao sy ny fiasa misy azy dia mamela ny olona mamorona, manova ary manova sary araka izay avelan'ny sary an-tsaina. Izy io dia afaka mifandraika amin'ny karazana asa rehetra, toy ny dokam-barotra, fanabeazana, famolavolana na hetsika hafa mety fampiasana programa famolavolana.
Ny fiakaran'ny asa ity dia tena manan-danja, izany no antony ahafahana mihazakazaka mpamorona ivelan'ny akademia, ireo izay nanapa-kevitra ny handray ny andraikiny ao amin'ny mianatra an'io sehatry ny fahalalana io.
Tsy fomba ratsy io, satria azo atao ny mahita tranga misy olona miomana bebe kokoa noho ny mpianatra mahay mamorona sary, fa tsy tonga hiresaka momba izany izahay, satria mitondra fampianarana momba ny ny fomba fanovana ny loko volo amin'ny sary, mamela ireo mpankafy ireo hahafehy ity teknika ity ao anatin'ny minitra vitsy.
Raha mitady ianao ovay ny loko volo amin'ny sary, tsy maintsy manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany ianao:
Tsy maintsy misafidy ny sary na sary izay te-hanitsy ny volo isika.
Izahay sosona mitovy dika mitovy, mamorona am-boalohany sy ny dika mitovy.
Hisafidy ny safidy saron-tava haingana isika, hahazoana antoka fa hanana mainty toy ny loko eo alohany, ary koa loko fotsy ho an'ny any ambadika. Toy izany koa, hampiditra borosy malefaka handokoana ny volo isika.
Vonoinay ny maska ​​haingana, amin'ny manaraka loko mivadika ary jereo ny fomba sisa tavela amin'ny volon'ny sary afaka manitsy azy.
Manampy a loko fanitsiana fandanjana loko, izay hivadika ho layer clipping. Avy eo isika dia mamindra ny soatoavin'ny aloka, manasongadina ary ny midtone mandra-pahatongantsika ny loko tiantsika, izay hanovantsika ny fomba fampifangaroana mba hijerena azy amin'ny farany.
Manampy ambaratonga hafa toa izahay saron-tava ary avy eo dia hanova ny soatoavina izahay, hampihena ny opacity eo anelanelan'ny 10% sy 15%.
Tsy maintsy hampidina ny opacity isika mandra-pahazoantsika ny loko irina.
Ireo no ilay dingana tokony hataontsika hanovana ny lokon'ny volo ho lasa sary amin'ny alàlan'ny programa Adobe Photoshop. Tsy sarotra mihintsy izany, ny fanandramana azy dia ho zavatra tsotra sy mahaliana, noho izany amin'ny fampiharana dia hahazo ny teknika mifanaraka amin'ny zavatra tianao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fanovana ny loko volo amin'ny sary amin'ny alàlan'ny Photoshop